» कम खर्चमा घुम्न सकिने नेपालको १० गन्तव्यहरु विवरण सहित कम खर्चमा घुम्न सकिने नेपालको १० गन्तव्यहरु विवरण सहित – हाम्रो खबर
कम खर्चमा घुम्न सकिने नेपालको १० गन्तव्यहरु विवरण सहित
2021, May 19th, Wednesday
नेपालको राजधानी र सबैभन्दा ठूलो सहर हो, संसारको कुनै अन्य शहर जस्तो छैन। स्टोरबाट धूपको गन्ध आउँदा सडक विक्रेताहरूले उनीहरूको सामानहरू धकेल्छन्, र मानिसहरूले आफ्नो दैनिक जीवन बिताउँछन्, धेरै सय वर्षदेखि काठमाडौं भक्तपुर र पाटनको साथ तीन प्रतिद्वन्द्वी शाही शहरहरू मध्ये एक थियो। एक अर्काको निकटतामा अवस्थित, आज यी तीनहरू प्रायः सँगै चल्छन्। काठमाडौंको मुख्य आकर्षण भनेको लामो समयदेखि नै दरबार स्क्वायर हो, जुन तीन शाही शहरहरूमा दरबार वर्गहरू र युनेस्कोको विश्व विरासत स्थल हो। विभिन्न आकार, आकार, शैली, र विश्वासका मन्दिरहरू र स्मारकहरू यहाँ फेला पार्न सकिन्छ। २०७२ को भूकम्पमा काठमाडौंको दरबार स्क्वायर लगायत थुप्रै सम्पदाहरु क्षतिग्रस्त भएको थियो,अहिले थुप्रै भवनहरू तथा सम्पदाहरुको निर्माण तथा मर्मत सम्भार भैसकेको छ। मन्दिर नै मन्दिरको सहर्को उपनाम पएको यो शहर विस्वको नयाँ तथा पुराना चिज बस्तुको अनुसन्धान गर्ने केन्द्रको रुपमा रहेको छ। २. भक्तपुर
“शाही शहरहरू” को तेस्रो भक्तपुर काठमाडौंको बाहिर तिब्बतको पुरानो व्यापार मार्गमा अवस्थित छ। भक्तपुरका लागि, व्यापार मार्ग दुबै एक धमनी लिंक र धनको प्रमुख स्रोत थियो। यसको सापेक्ष रिमोटनेसको कारणले शहरलाई स्वतन्त्र रूपमा र अन्य दुई शहरहरूभन्दा भिन्न हुने तरिकाले विकास गर्न अनुमति दियो। पाटन र काठमाडौंको विपरित भक्तपुरको जनसंख्या हिन्दू हो। शहरको यात्रा सुरु गर्नको लागि उत्तम ठाउँ दरबार स्क्वायर हो जहाँ शाही दरबार बाहेक धेरै मन्दिरहरू पनि अवस्थित छन्। सम्पूर्ण क्षेत्र युनेस्कोको विश्व सम्पदा हो। २०७२को भूकम्पमा भक्तपुरको दरबार स्क्वायरमा रहेका धेरै भवनहरू क्षतिग्रस्त भए, मुख्य मन्दिरहरू पूर्ण रूपमा मर्मत भइसकेका छन् तर वरपरका क्षेत्रहरूको प्रगति द्रुत गतिमा अघि बढेको छैन।
काठमाडौंबाहिर बौद्धनाथ स्तूप विश्वमै आफ्नो प्रकारको सब भन्दा ठूलो स्तूप हो भक्तपुर जस्तै यो पनि तिब्बतको पुरानो व्यापार मार्गमा पर्दछ र युनेस्कोको विश्व सम्पदा स्थल हो। स्तूप आफै पनि ज्ञानको प्रतीक हो तर बौद्धनाथमा प्रतीकात्मकता विशेष रूपमा स्पष्ट छ। प्रत्येक फरक आकारले पृथ्वी, पानी, आगो, हावा र गोलाहरू मध्ये पाँच तत्वहरू मध्ये एक प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन पाँच बुद्धका विशेषताहरू पनि हुन्। स्तूपको रूपमा सँगै ल्याइएको, तिनीहरूको एकता ब्रह्माण्डको संरचना अमूर्त फेसनमा प्रतिबिम्बित गर्दछ। २०७२ को भूकम्पको दौडान स्तूपले सानो क्षति सहेको थियो र अब पूरै मर्मत गरिएको छ।
पोखरा तल पर्वतको फेदीमा बसालिएको र संसारको सबैभन्दा अग्लो पहाडहरू – धौलागिरि, मनास्लु, र अन्नपूर्णप्रथम द्वारा घेरिएको – पोखरा नेपालको सबैभन्दा दर्शनीय शहरहरू मध्ये एक हो। पदयात्रीहरूको लागि पोखरा हिमालयको प्रवेशद्वार हो र जोमसोम र अन्नपूर्णक्षेत्रमा पदयात्राका लागि सुरूवात बिन्दु हो। यो थोरैका लागि आराम गर्नको लागि पनि रमाइलो ठाउँ हो, या कि पैदल यात्राको अघि वा पछाडि। जनसंख्याको हिसाबले यो काठमाडौं पछि नेपालको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो शहर हो तर अझै ठूलो शहर जस्तो महसुस गर्दैन। जब तपाईं काठमाण्डुबाट २०० किलोमिटर पूर्वमा यात्रा गर्नुहुन्छ, तपाईं एकदम सफा हावा र रमाइलो मौसम तुरून्त देख्नुहुनेछ। लेक फेवा, लेकसाइड होटेल, रेस्टुरेन्ट, र पसलहरूको क्लस्टरको साथ, थोरै आराम गर्न खोज्नेहरूको लागि आदर्श हो।४.अन्नपूर्ण अन्नपूर्ण क्षेत्र नेपालका सबैभन्दा लोकप्रिय पदयात्रा क्षेत्रहरू मध्ये एक हो, जुन विकल्पका साथ केही दिनदेखि केहि हप्ताहरू हुन्छन्। अन्नपूर्ण क्षेत्रका तीन मुख्य मार्गहरू काँसा मिल्छ र ठाउँहरूमा मिल्दछ, र तपाईं मार्गहरू मा एक अंश वा भिन्नता गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ। मार्गहरू राम्रोसँग चिन्हित छन् र अनुसरण गर्न सजिलो छ। अन्नपूर्णा माउन्टेन वरपर अन्नपूर्ण सर्किट पूरा गर्न को लागी २१ दिन लाग्छ र पर्याप्त समय छ जो मानिसहरू संग अविश्वसनीय रूप मा लोकप्रिय छ। यस मार्गलाई कहिलेकाँही “एप्पल पाई सर्किट” पनि भनिन्छ, यस मार्गमा अधिकांश चियाहाउसहरूले फ्राइड एप्पल पाईको आफ्नै संस्करण प्रदान गर्दछ भन्ने तथ्यलाई सन्दर्भमा। यस क्षेत्रको लोकप्रिय पैदल यात्रा गन्तव्य, प्रायः अन्नपूर्णसर्किटको संयोजनमा पै गरिएको हो, घोरेपानीको नजिकै पून हिल (२२१० मिटर) को ट्रेक हो। प्रायः पर्वतारोहणहरू सूर्योदय र धौलागिरि, अन्नपूर्णा दक्षिण, माचपुचरे, र सिंगा चुलीको आश्चर्यजनक दृश्य हेर्न चाँडै पून हिलमा जान प्रयास गर्छन्। अन्नपूर्णा अभयारण्य अन्नपूर्णाको चुचुराहरू बीच गुँड गर्दछ र पुग्न पाँच दिन लाग्छ। मुक्तिनाथको बाटोमा छ
५.चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको फरक पक्षको अनुभव लिन आउने ठाउँ हो। यो वन्यजन्तुहरू हेर्नको लागि अद्भुत ठाउँ हो र यसमा सफारी प्रकारको वातावरण हुन्छ। काठमाडौं भन्दा १,४०० मिटर जति तल कतै १०० मिटरको उचाईमा चितवनको उष्णकटिबंधीय मानसूनको मौसम छ जुन तपाईले नेपालमा खोज्नुहुने भन्दा धेरै फरक छ। यात्रीहरू वन्यजन्तुहरू हेर्न यहाँ आउँछन्। पार्कमा गैंडा, बाघ, चितुवा, भालु, ), हरिण, र अन्य धेरै जंगली जनवार घर छ। ताजा पानी डल्फिन (ग्याजेटिक) र गोहीहरू नदी बसोबास गर्छन् । चराहरूको ५००० भन्दा बढी प्रजातिले चितवनलाई पक्षीविज्ञानीहरूको लागि स्वर्ग बनाउँछ। लजहरूबाट यात्राले तपाईंलाई पार्कमा लैजान्छ, जहाँ पैदल, वा प्राय: जसो जनावरहरूको नजिकबाट हेर्ने हात्तीहरूमा। चितवन काठमाडौंको दक्षिणपश्चिममा भारतीय सिमाना नजिकै अवस्थित छ र युनेस्कोले विश्व सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा समावेश गरेको छ।
पैदल यात्राको लागि अविश्वसनीय क्षेत्र हो, उच्च पासहरू, विस्तृत दृश्यहरू, पुरानो मठहरू, र पहाडी दृश्यहरू सहित। वसन्त ऋतुहरुमा लालिगुराँस वनहरू धपक्कै सजिएका हुन्छन । यस क्षेत्र, शेर्पा जातिको घर, नेपालका अन्य लोकप्रिय ट्रेकिग क्षेत्रहरू भन्दा कम विकसित छ र काठमाडौंको निकटताको बावजुद यस ट्रेल्समा सामान्यतया कम व्यस्त छ। अतिथिगृहहरू र खाना सहित गाउँहरू मार्गमा फेला पार्न सकिन्छ, यद्यपि अन्य ट्रेकि क्षेत्रहरू भन्दा केही बढि फैलिएको छ। भूकम्पले यस क्षेत्रका केहि गाउँहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको थियो।तर अहिले पुन निर्माणको लगभग अन्तिम चरणमा छन।
काठमाडौंको पश्चिममा पहाडमा अवस्थित, बौद्धनाथ पछि स्वयंभूनाथ काठमाडौं उपत्यकामा दोस्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्दिर हो। मन्दिरका भागहरूमा बस्ने बासिन्दाका कारण, यसलाई बाँदर मन्दिरको रूपमा बढी चिनिन्छ। सर्वव्यापी ईश्वरको आँखाले चित्रित स्वयम्भु स्तूपले मन्दिर परिसरको केन्द्रबिन्दु बनाएको छ। यो मूल रूपमा प्रागैतिहासिक पंथ साइट हो,। उत्तरी नेपाल र तिब्बतका वज्रियान बौद्धहरूको जीवनमा खास गरी काठमाडौं उपत्यकाका नेवारी बौद्धहरूको जीवनमा स्वयम्भुले ठूलो भूमिका खेल्छ। 2015 को भूकम्पले स्वयम्भुनाथ मन्दिर परिसरलाई केही क्षति पुर्‍यायो; यद्यपि मर्मत अब पूर्ण भएको छ, र मन्दिर पहिलेको अवस्थामा फर्कियो।
९.सगरमाथा बेस क्याम्प
माउन्ट सगरमाथाको शिखर, पृथ्वीको सब भन्दा अग्लो पहाड, ,,8488.86 मिटर (3931फिट) अग्लो हुन्छ। 19533 मा न्युजील्याण्डका एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा द्वारा 1953पहिलो सफल आरोहण पछि माउन्ट एभरेष्ट क्षेत्रमा ट्रेकिंग लोकप्रिय भयो। त्यस समयदेखि धेरै धेरैले यस पहाडको आरोहण गरेका छन्, तर सगरमाथा बेस क्याम्पको लागि अझ धेरै ट्रेक मार्ग माथिको शिखरको झलकको लागि। हालसालैका वर्षहरूमा हिमालले त्रासदी र नाटकको आफ्नो साझा हिस्सा देखेको छ। २०७२को भूकम्प र अघिल्लो हिमपहिराहरूको साथसाथै पहाडमा पर्वतारोहीहरू बीचको विवादले एभरेष्ट पदयात्रा र आरोहणमा आफ्नो छाप छोडेको छ। सगरमाथा क्षेत्रलाई ट्र्याकिंगका लागि सामान्यतया देशको सब भन्दा सुन्दर क्षेत्रको रूपमा लिइदैन, तर सगरमाथाको आकर्षणले पर्वतारोही र पदयात्री दुबैका लागि लोकप्रिय गन्तव्य बनाउँदछ। त्यहाँ आधार शिविर पहुँच गर्न विभिन्न मार्गहरू छन् र एक यात्रा आयोजित गर्न को लागी धेरै विकल्पहरूछन।। धेरै ट्रेकिंग कम्पनीहरूले एक मार्गनिर्देशित हाइक प्रस्ताव गर्छन्, ।
१०. लुम्बिनी लुम्बिनी बुद्ध शाक्यमुनी भनेर चिनिने ऐतिहासिक बुद्ध सिद्धार्थ गौतमको जन्मस्थल हुनको लागि प्रसिद्ध छ। काठमाडौंदेखि करीव २२५० किलोमिटर टाढाको मुख्य पर्यटक ट्र्याकमा अवस्थित लुम्बिनी पोखराबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मार्गमा महत्वपूर्ण मार्ग हो। यस तीर्थयात्री शहरमा, युनेस्कोको विश्व सम्पदा स्थल, त्यहाँ शान्तिको अनुभूति छ। अधिकांश आगन्तुकहरु बौद्ध तीर्थयात्रीहरु हुन् संसार भर बाट, बुद्धको पाइलाहरु लाई पछाडि आफ्नो जीवनको स्टेशनहरु बाट। बुद्धको आमालाई समर्पित माया देवी मन्दिर बुद्धको जन्म भएको ठाउँ हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। यसले बुद्धको जन्म चित्रण गर्ने दोस्रो शताब्दी ईस्वी देखि पुरानो ढुङ्गा समावेश छ।
“एमसीसी उपाध्यक्ष,फर्केलगत्तै चिनियाँ,राजदूतको दौडधुप, बिहानै पुगिन,नेताहरूको निवासमा”